Magalada Godey Ayaa Tabobar Xirfadeed Loo Qabtay macaliminta Kuliyadaha
Godey (NogobNews) 07/02/2011 Tobabarkan oo ahaa mid ka kooban laba waji soconayaana mudo 10 cisho ah ayaa waxaa bixinayay 3 khabiir oo ka yimid Dalka Filibiin iyadoo qaybta 1aad ee tobabarkana lagu baranayay ayaa
Madaxwaynaha DDS iyo Waftigii uu horkacayay oo saaka garoonka ee BOLE airport addis ababa kasoodagay
Jigjiga(NogobNews)07/02/2011 MAdaxweynaha DDS Mudane Cabdi Maxamuud Cumar Iyo Waftigii Uu Hogaaminayay, oo Waayadanba Ku Maqnaa Dalkalka Maraykanka Iyo Ingiriiska Ayaa Dib Ugu Soo Laabtay Dalka.
Shirkii Weynihii Jaaliyadda DDS ee London oo Guul ku dhamaadey iyo Madaxweynihii uduuley Ethiopia
London (NogobNews) 06/02/2011 Sidii lagu balansanaa waxaa saaka 10-kii subaxnimo ka furmey shirweyne ka dhacayay safaaradda Dalka Ethiopia ee Magaalada London iyadoo dad aad ubadan oo gaadhaya 400 ruux ay buux
Qabridahare (NogobNews)03/10/2010, Shir si wacan loo soo abaabulay ayaa waxa uu ka socdaa magaalada Qabri-Dahare ee gobolka Qoraxeey. Shirkan ayaa ujeedadiisu ahayd sidii nabad loogu soo dabaali lahaa dhamaan
Garigoan (NogobNews)03/10/2010, Shir si fiican loo soo agaasimay in badana la ga soo shaqeynayey ayaa waxa uu ka furmay tuulada Geri-Go’an oo ka tirsan degaanka Nogob. Shirkan ayaa waxa uu ka mid ahaa shirarkii ay
Masuuliyiinta ONLF oo xaflad loogu sameeyey Hoolka Sayid Maxamed Cabdille Xasan
Jigjiga, (NogobNews)28/09/2010 – Waxaa masuuliyiinta garabka nabadda qaatay ee ONLF xaflad soo dhaweyn ah, oo si weyn loo soo agaasimay, loogu sameeyey Hoolka Shirarka ee Sayid Maxamed Cabdille Xasan ee magaalada Jigjiga.
Jaaliyaadka deegaanka oo ku soo qulqulaya Addis Ababa, garabka nabadda qaatay ee ONLF
Addis Ababa, (NogobNews)28/09/2010– Waxaa magaalada Addis Ababa si aad ah ugu soo qulqulaya qeybaha kala duwan ee jaaliyaadka deegaanka Soomaalida ee aduunka dacalladiisa, si ay goobjoog uga noqdaan shirarka hashiiska dhexmaraya dowladda iyo garabka nabadda qaatay ee ururka ONLF.
Ugaas Xasan Ugaas Maxamed Ugaas C/salaan Baaq Taageero: Beesha reer amadin oo u Hambalyeyneysa Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar
London(NogobNews)10/09/2010, Waxaan halkan hambalyo uga dirayaa Madaxwaynaha Deegaanka Soomalida Mudane Cabdi M.Cumar Waxaaan ugu habalyey nayaa go.aanka geesinimada leh ee uu ku siidaayey maxaa biista ku jirtay jeelasha wadanka u Rajaynayaa